Jery taratra… herinandro: Alefa, alefa hatrany… | NewsMada
Jery taratra… herinandro: Alefa, alefa hatrany…
Mbola mibahan-toerana ary nanenika an’i Madagasikara manontolo ny fiaraha-mirona tamin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena Bareo eo amin’ny baolina kitra. Efa zava-dehibe ny dingana vita tamin’ny ”Can 2019”, na raraka teo amin’ny ampahefa-dalana aza. Sambany niatrika izany, nefa tonga tamin’izay dingana izay. Hanetriketrika ny fitsenana ny fahatongavany an-tanindrazana, anio: maherifon’ny firenena.
Nilaza ny eo anivon’ny Ceni fa hahemotra amin’ny 1 aogositra ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsaha-kofidina ho ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna. Amin’ny 28 oktobra no hanatanterahana ny latsa-bato amin’izany, araka ny volavolana tetiandrom-pifidianana naroson’ny Ceni. Mbola handrasana ny fankatoavan’ny filankevitry ny governemanta izany amin’ny famoahana didim-panjakana fihaikana mpifidy.
Namoaka ny tatitry ny fanaraha-maso ny fifidianana depiote ny Ivontoerana Safidy. Tolo-keviny hanatsara ny fifidianana ny hanitsiana ny lalàm-pifidianana, ohatra, ny famerana ny vola lanina amin’ny fampielezan-kevitra… Miisa 8 (5%) ireo depiote voafidy amin’ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy 30% – 40%. Iray ny voafidy amin’ny taha ambonin’ny 40%, ary iray ihany ny tamin’ny taha ambonin’ny 50% (55,21%).
Namoaka tatitra ny Komity iombonana ho an’ny dina “Toky nomena” fa nitranga tamin’ny fampielezan-kevitra sy ny mialoha izany ny 64% amin’ny tsy fanajana ny Toky nomena. Tsy fahatomombanana sy hosoka hita nandritra ny andro fandatsaham-bato ny 30%, ary taorian’ny fandatsaham-bato ny 6%. Tolo-keviny ny hiandanian’ny depiote amin’ny etika, ny fangaraharana sy ny tamberin’andraikitr’ireo depiote…
Amin’izany rehetra izany, mandeha ihany ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka: alefa, alefa hatrany… Anisan’izany ny fivorian’ny Antenimierampirenena, ny fifidianana kaominaly. Tsy latsak’izany ny fanadinan’ny mpianatra, tsy misy fiovana amin’ny teo aloha. Mbola eo koa ny tsy fandriampahalemana etsy sy eroa, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady tany… Mandeha? Mbola be ny mila fanovana…